Faroole oo maanta ku dhawaaqay Urur Siyaasadeed. | Somali - Diaspora
Faroole oo maanta ku dhawaaqay Urur Siyaasadeed.
Garowe (Moment Media Group):- Madexweynaha dawlada puntland mudane C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa manta si rasmi ah ugu dhawaaqay Urur Siyaasadeedkii ugu horeeyay ee looga dhawaaqo deegaanada puntland oo loogu magacaabo horseed.
Urur siyaasadeedkan oo mar horoba la diiwaangaliyay xubnihiisii ayaa madexweynuhu wuxuu uga hor dhawaaqay golaha baarlamaanka Puntland oo uu maanta hortagay, waxaana xarunta baarlamanka sidoo kale fadhiyay oo goobjoog ka ahaa xubnaha golaha wasiirada iyo Madexweyne ku xigeenka Puntland.
Madexweynaha dawlada puntland mudane C/raxmaan maxamed maxamuud faroole oo khudbad dheer oo dhinacyo badan leh ka jeediyay kalfadhigii maanta ee Baarlamaanka ayaa sheegay in ururkani uu noqonayo Urur siyaasadeedyada la doonayo in puntland laga hirgaliyo kii ugu horeeyey, kuwaas oo tartan kadib sadex ka mid ah ay u soo bixi doonaan Marxalada Axsaabta siyaasadeed ee puntland.
Urur siyaasadeedkan uu maanta Madexweynuhu ku dhawaaqay waxaa astaan looga dhigay geedka GOBKA ah oo uu madexweynuhu tilmaamay in doog iyo jilaalba uu cagaar yahay wuxuuna sidoo kale gun dhig uga dhigay Xisbiga NABAD, MIDNIMO iyo HORUMAR.
Madexweynaha dawlada Puntland mudane C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo ah guddoomiyahaXisbiga ayaa sheegay in manta ay tahay maalin taariikhi ah, in la xusana mudan maadama lagu dhawaaqay urur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee puntland.
Madexweynuhu wuxuu carbaabay in asaasayaasha Ururkani ay yihiin 209 xubnood oo ka kooban dhamaan golayaasha dawlada sida Wasiirada, Xildhibaanada Barlamanka, Guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland.
Madexweynuhu wuxuu sheegay in Ururkani uu xafiisyo ka furan doono ilaa 5 gobol oo ka mid ah Puntland iyo dhamaan degmooyinka islamarkaana la dardargalin doono shaqada Ururkan.
Madexweynuhu wuxuu dhinaca kale sheegay arrintani in uu yahay mid dhiirigalinaya hanaankii Puntland u qorshaysnaa ee looga gudbayay Marxalada qabiiliga ah looguna gudbayay marxalada Axsaabta badan, wuxuuna bulshada Puntland u rajeeyay in ay sidan oo kale u furan doonaan ururada ay doonaayaan si ay ugu tartamaan hogaanka maamulkan Puntland.
Madexweynuhu wxuu rajo wanaagsan ka muujiyay hanaankan siyaasadeed ee Puntland ay u socoto, wuxuuna aad u dhiirigaliyay in dadku ay ururo furtaan iyadoo la ilaalinayo jiritaanka maamulka lana raacayo shuruurda dalka u taala.
Madexweynaha dawlada puntland wuxuu sidoo kale tilmaamay in ururkani uu maalmaha inagu soo aadan mari doono buuxinta shuruudihii ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Puntland ee ururada lagu kala reebayay si ay uga mid noqdaan Axsaabta Siyaasadeed ee Puntland.
Ururkani uu Madexweynuhu manta ku dhawaaqay wuxuu noqonayaa Urur Siyaasadeedkii ugu horeeyay ee Puntland looga dhawaaqo tan iyo markii uu guddiga doorashooyinka Puntland shaaciyay in la furan karo Ururada ku tartama Marxalada Axsaabta sisaasadeed ee Puntland, waxaase la filayaa ururo kale oo dhawaan ku soo biira masraxa siyaasadeed ee puntland.
The Export of Charcoal: A Colossal Loss of Somali Forests Tayo ma yeelan doonaan wasiirada tirada yar ee xukuumada ra’isul wasaare Saacid lagu soo koobay ?!!